Koety: Na eo aza ny fahavaratra, tsy mangina mihitsy aty! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2018 2:45 GMT
Mbola fahavaratra foana aty. Miha miakatra ny volavelona fa mbola manao hetsika nentim-paharazana mandritra ny fahavaratra foana ireo Koetiana.
Mitoraka blaogy mikasika ny diany an-tsambo voalohany indrindra i Pepsi Guy ary manome fampitandremana.
Taorian'ny fotoana ela niandrasana, afaka nitondra ny samboko tamin'ny andrana voalohany ihany aho nony farany. Tsara be ny andro tamin'izay, nilay ny fitaingenana sambo (na dia tsy maintsy nandeha mora mba hanazarana ireo maotera vaovao aza izahay) ary tena tsara be ny filentehana anaty rano.
Mankany amin'ny Saturday Dewaniya an'ny havany (ambohipihaonana isankerinandron'ireo lehilahy mpinamama akaiky) i Zdistrict, fa misy tsiambaratelo amin'ity in-dray mitoraka ity!
Avy eo, namoaka kitapo iray izy dia nanontany ilay bandy iray hoe aiza ny azy, dia namoaka kitapo iray fanindroany izy, avy eo nanontany hoe aiza ny azy ilay olona fahatelo, dia namoaka kitapo fanintelony izy. Toy ny hoe Dadabenoely izy, mba naniry ny hamoahany kitapo iray hafa tao amin'izany fotsiny aho.
Tsy nandray fepetra na kely aza ka main'ny masoandro i breezeey.
Main'ny masoandro ny tarehiko ary tsy nampoiziko ho toy izao saingy hadisoako izany. Misy olona handeha any amin'ny masoandro migaingaina ve nefa tsy hanao menaka na mpanakana masoandro?
Nitsambikina tao anaty ranomasina aho ary tsy dia niraharaha izany loatra. Nilaza tamiko izy ireo fa mpamadika ny ranomasina ary ankehitriny, manenina aho satria tsy afaka mivoaka na mahita olona – fanalefahana ny fiteny momba ny tarehiko ny hoe ”may”.
Nahita i Forzaq8 fa niditra tao an-dohan'ny olona iray ny masoandro.
Tao anatina tafatafa niarahana tamin'i Alwatan Daily tao Koety nandritra ny Week Topic (izay nikasika ny fitorahana blaogy, na fahafihana blaogera kokoa), nilaza ny heviny mikasika ireo blaogera ny Sekreteran'ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety ao Koety, izay tena mahagaga ny fiheviny ny blaogy, ary koa ny isan'ny fotoana anehoany fa mangataka ny hanakatonana na hanarahana maso azy ireny izy ary tena fanarabiana tsy misy ohatr'izany ny fahenoana izany avy aminà bandy tokony hangataka ny fahalalahana maneho hevitra bebe kokoa.
Ny Flugtag no toa laza vaovao ao Koety ary miha betsaka foana ireo blaogera miditra amin'izany! Tsy misy hafa ankoatra an'i Nibaq no mitarika ny iray amin'ireo ekipa ary ampian'ny blaogera telo hafa izy!
Faly manolotra ny andrana fiaramanidiny Red Bull-flugtag voalohany ny ABNE & Co, Ekipa Imperial27, ho fahatsiarovana ny Imperial Airway voalohany indrindra tao Koety tamin'ny 1927. Ahitana ny mpanamory fiaramanidina fototra sy ny mpahay majika, i Nibaq (mpanamory), izay arahin'ireo mpioko tsy misy toa azy amin'ny resaka injenieria, i Marzouq, Mark sy i K ilay ekipa.